SomaliaReport: al-Shabaab oo Aaminsan In Iphone-ku Wax Basaaso
Xoogagga mayalka adag ee al-Shabaab ayaa joojiyey isticmaalka iPhone-ka. ururku wuxuu aaminsan inay aaladdani ahayd midda keentay in la bar-tilmaameedsado hoggaamiyahoodii Aaden Xaashi Cayroow oo ku dhintay weeraro gantaalo oo uu maraykanku soo riday.
Wada hadalo aad u kulul oo ku saabsan sancada Iphone-ka ayaa in dhawaydba ka socday saldhigga xarumaha warbaahinta ee Al-Shabaab sida degelka warbaahineed ee Alqimmah iyo barta warbaaahineed ee ku taal duleedka Dayniile loona yaqaan Alkataaib. Khuburo al-Shabaab ka tirsan oo ay ku jiraan Ajaanib ayaa daraasaynayey sida ay tiknoolojiyada Iphone-ku u shaqayso iyagoo walwal ka muujiyey in aaladdan loo adeegsan karo ujeeddooyin xagga dabagalka ah.
Khuburada xagga Tiknoolojiga ee arinkan u xilsaarnaa ayaa iyagu muddo ka badan 12 saac galiyey in la heli karo sumadda ruuxa haddii habka shaqo ee la adeegsanayo lagu tallaalo spywaro si qarsoodi ah macluumaadka ku kaydsan aaladda Iphone-ka ugu gudbin kara hay’adaha dabagalka ee dibadaha.
Zakariye oo ah xeeldheere xagga sancada Iphone-ka ayaa sheegay in khuburo ka kooban toban qofood ay soo saareen nidaam lagaga hortagi karo khatarta. Waxaan u isticmaalaynaa nidaamkaa inaan kaga hortagno khatarta nooga iman karta murtaddiinta. Waan la soconaa inay doonayaan inay mid mid noo ugaadhsadaan.
Ahmiyadda iyo qorshaha ugu muhimsan ee loo abuuray 10kan nin ayuu sheegay Zakariye inay tahay bal in la ogaan karo haddii Macluumaadka iyo wada-hadalada Iphoneka lagu diri karo Satelaytka iyadoo loo sii marinayo aaladda GPS-ta.
Khabiirkan oo u waramayey wargayska Somalia Report ayaa ugu yeedhay Iphone-ka aalad xasaasi ah isagoo hadalkiisa sii wata wuxuu yidhi “ Kalsooni kuma qabno qalabka ay galbeedku soo saaraan, waxaanan ka qabnaa shaki wayn”.
Zakariye ayaa ka gaabsaday inuu wax ka yidhaa haddii taleefanada kale ee ay GPS-tu ku xidhan tahay laga joojin doono gobolada kale, mar wax laga waydiiyey sida ay ku koontarooli karaan taleefano jeebabka lagu haysto, wuxuu ku jawaabay waxaan soo saarnay nidaam iyo xeelad lagu ogaan karo meesha ay aaladdaasi ku jirto.
Idaacadaha gudaha ee al-Shabaab iyo degeladooda warbaahineed sida Radio Alfurqaan, Radio Andaluus, Somalimemo.net iyo Amiirnuur.com ayaa dhamaantood ka wada faaloonayey khatarta ay leedahay joojinta Iphoneka. Barta internet ee Amiirnuur.com ayaa dhawaan daabacday maqaal loogu magic daray “Ma og tahay in Iphone-ku yahay Spyware”? si ay uga digaan taageerayaashooda in Iphone-ka aan lagu ugaadhsan oo kaliya saraakiisha al-Shabaab balse lagu raadsado xubnaha iyo kuwa kale ee argagixisada loo yaqaan.
Wareegtadan lagu joojiyey isticmaalka Iphoneka ayey al-Shabaab aaminsan yihiin inaysan wax saamayn ah ku yeelan doonin bulshada isticmaasha oo iyagu ka yar 0.01 boqolkiba. Zakariya oo hadalkiisa sii watan wuxuu yidhi “Go’aankan wuxuu ku salaysan yahay caddaymo aan hayno iyo khatar nagu iman karta sidaa darted waa inaan ka taxadarno aaladaha noocan oo kale ah”.
Mid ka mid ah shacabka deegaanka Jowhar magaciisana ku soo koobay Maxamed ayaa yidhi “Ma hubno inay xoogagga Al-Shabaab na siin doonaan magdhaw, maadaama looga bartay amaro ay iska soo rogaan iyagoon u aabo-yeelin dareenka bulshada.”
Qalabka Taleefanada & Internetka OO Ay al-Shabaab Isha Ku Hayso
al-Shabaab ayaa tallaabooyinka adag ee ay qaadday waxaa ka mid ah inay gobolada koonfureed iyo kuwa dhexe ee ay maamusho ay warbixinada la is dhaafsanayo iyo macluumaadka baxaya oo idil ay gacanta ku hayso. Bilowgii 2007.ka ayey bilowday kor ka haynta khadadka taleefanada ee soo galaya ashkhaasta ay ka shakisnaayeen sida hay’adaha aan dawliga ahayn iyo suxufiyiinta iyaga oo isticmaalaya shirkadda Hormud Telecom ama rugta degelada warbaahinta. Boqolaal aya la aaminsan yahay in la dilay ka dib markii la baadhay taleefanadooda.
Hoggaanka ururka ayaa shaki ka qaba taleefanada gacanta ee hadyad ahaanta loogu keeno askartooda iyo kuwa ajaanibta kale ahba ilaa markii hoggaamiyahoodii Cayro la dilay.